TorLaser - Casaan, Buluug, Qulqul, Calaamadda Laser Green | Laser - TorLaser.com
AUD CAD oo koron EUR iibiyey HKD JPY NZD SGD USD
Laascaanood Buluug ah & Xiddigle
Ku soo dhowow TorLaser!
TorLaser waa mashruuc ka dhashay sanadkii 2009 kana yimid dareenka taageerayaal dhawr ah oo ku saabsan adduunka laser.
Waxay ka soo kacday baahi loo qabo in la bixiyo goob ku takhasustay tilmaamaha laser ee awoodda dhabta ah Qiimo la awoodi karo si taageere kasta u helo shey tayo leh oo tayo sare leh qiimaha ugu wanaagsan.
Laydhka cas wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee soo baxa in ka badan saddex sano, sidaa darteed durba wuxuu helay xasillooni iyo qiimo aad u hooseeya. Mowjadaha mawjadaha casaanka ee u dhexeeya 630nm ilaa 670nm. Way ka yar yihiin kuwa cagaarka ah, laakiin taa beddelkeeda awoodda ay ku gubto ayaa aad uga badan. Leesinka cas wuxuu ku habboon yahay nooc kasta oo loo isticmaalo: madadaalo, tijaabooyin, soo bandhigid…
Tilmaamayaasha iftiinka laser cagaarka ayaa hadda ah kuwa ugu badan ee la adeegsado, maxaa yeelay iftiinka cagaaran wuxuu 6 jeer ka iftiimayaa isha aadanaha marka loo eego casaanka. Mowjadaha mawjadaha cagaaran oo u dhexeeya 500nm illaa 550nm, 532nm ayaa loo aasaasay inay yihiin kuwa ugu badan. Nalalka cagaaran waxay ku habboon yihiin nooc kasta oo adeegsiga ah: madadaalo, astronomy, sawir qaadid, tijaabooyin, bandhigyo, muuqaallo, muuqaallo duurjoog ah, ugaarsi, ugaarsi,…
Tilmaamaha leyshka buluuga ah iyo kuwa loo yaqaan 'violet laser violet' ayaa goor dhow soo muuqday, waana kuwa ugu go'doonsan uguna adag in la helo Buluuggu wuxuu isku daraa iftiinka weyn ee cagaarka iyo awoodda lagu gubiyo caarada. Wajiyada buluuga ah ee tilmaamayaasha buluugga ahi waa 445nm iyo violet 405nm. Qalabka buluuga ah ee buluugga ah iyo kuwa loo yaqaan 'violet' ayaa ku habboon nooc kasta oo loo isticmaalo: madadaalo, sawir qaadasho, tijaabooyin, soo bandhigid iyo xitaa iftiinka astronomi!
Kaliya Real Power
2 Warqada Sanadka
Sawirro dhab ah & Muuqaallo
Qiimaha ugu fiican ee la ballanqaaday
FADLAN DHEERAAD AH!
Taxanaha taxanaha ah
-2009 2020-XNUMX - Waxaa awood u leh TORLaser.com® - Tilmaamayaasha Laser Premium